Indlela yokuphilisa i-hydradenitis kunye nezilwanyana zomntu?
I-Hydradenitis iyisifo esivame ukuqhutyelwa kwingingqi engaphantsi kwesiphumo ngenxa yesibindi okanye isifo. Inokuchaphazela ezinye iindawo zomzimba, apho zikhona izigulane ezininzi ezikhukhulayo. Ngokuqhelekileyo imeko ebuhlungu iyongezwa kwiimvakalelo ezingathandekiyo. Abantu abaqhelekileyo esi sifo sinalo igama elingu-"udch udder". I-Hydradenitis ingenzeka kumadoda kunye nabasetyhini ngenxa yokuba amaninzi amabhaktheriya awonayo ahlala emzimbeni wethu. Ngenxa yoko, umzekelo, ukucheba ummandla we-underarm kungabangela ukulimala okona. Oku kwanele ukuba kwenzeke ukuvuvukala okukhulu. Kule ndawo ungayifunda indlela yokuphilisa i-hydradenitis ngamayeza omntu.
Ngokuqhelekileyo, i-hydradenitis ivela ngenxa yeentambo ze-streptococcal ne-staplocloccal. Kwakhona, isifo singakhiwa ngenxa yokungasebenzi kwemali ye-hormonal okanye ukuphazamiseka kwenkqubo ye-endocrine. Ukunyangwa kwesi sifo akunakwenzeka nje kuphela, kodwa kwanamanyathelo abantu abaye bangena kwiminyaka emininzi. Kodwa, zombini kwonyango lokuqala, kwaye okwesibini, kubalulekile ukuba uhlolisise kakuhle imbangela yokubonakala kwe-hydradenitis.
Nangona isi sifo sikhula ngokukhawuleza, iibhaktheriya zilimaza umzimba ngokuqhubekayo nangokuzithemba. Ngokukhawuleza ngaphambi kokuqala kwesi sifo kwindawo echaphazelekayo, ulusu luba lukhulu, kwaye xa ucinezelekile, umntu uvakalelwa yintlungu. Ngaphantsi kwesikhumba unokufumana isigunqa, nto leyo igxininise ukuvuvukala. Ububanzi bayo bufike kumitha amane. Unyango ngamachiza okanye iindlela eziqhelekileyo zingaqala kuphela emva kokungena kwesi sifo kwisigaba sesibini, kuba ezinsukwini zokuqala akunakwenzeka ukufumana eso sifo. Kodwa kwinqanaba lesibini intlungu yesikhumba iqala ukuphazamiseka, ivule kwaye idide. Kwinqanaba lesithathu, isikhumba siphume, i-pus igeleza ngaphandle kwaye ubuso bubonakala kwesikhumba esifana ne-dog's paws. Ukuba kukho iimpawu ze-hydradenitis, kufuneka unqume indlela yokuphatha esi sifo. Ngaphandle koko, iya kuqala ukuqhubela phambili, kuba ayiyi kudlula ngokwayo nangemva kokuba i-pus ifike phezu komhlaba.
Utyando kunye namacwecwe kunye ne-antimicrobials akuchaswanga. Unyango kunye neendlela eziqhelekileyo lusebenza kakhulu. Kukho iindlela ezininzi zokupheka apho abantu bajamelana naloo mfo ngempumelelo.
Ubusi neengqayi zeqanda.
Enye yezilwanyana eziphumelelayo izikhephe yipakeki ephothiweyo eyenziwe ngamaqanda nobusi. Kulula ukukulungisa ngokuxuba umgubo kunye nezikhupha zeqanda, ukongeza ubusi obuncinane kunye ne smaltz. Isiphumo isinkwa esicatyambo njengenhlama. Kumele ifakwe kwiindawo ezichaphazelekayo sisifo. Utshintsho kwi-compress entsha kufuneka ibe emva kwexesha elingaphantsi kweeyure eziyi-9.
Ukhilimu omnandi kunye nomgubo.
Ukunyanga i-Hydradenitis ingaba kunye nezinye icompress. Unokwenza ube ngumgubo kunye nochumisi omuncu. Ukuqinisekisa ukuba isalathisi asisasazi phezu kwesikhumba, kufuneka senziwe ngokwaneleyo kwaye sisetyenziswe kwindawo echaphazelekayo. Umgubo wolu hlobo unyango olufanelekileyo.
Amaqabunga eklabishi kunye ne-lilac.
Ungasebenzisa kwakhona amaqabunga eklabishi kunye namaqabunga e-lilac ukuphatha ama-abscesses. Faka isicelo esikhumbeni abayifunayo ngaphakathi kwiphepha kwi-abscess, ngaphambi kokuba ihlambuluke kwaye ihlambuluke.
Kwakhona phakathi kweephepheni ziyaziwa kakhulu "i-Tibetan". Ukuze upheke, kufuneka udibanise ama-50 amagremu yesepha yokuhlamba impahla, kungcono ukusebenzisa umnyama, umgubo we-rye omkhulu, isipuni seshukela kunye neoli yemifuno. Konke oku kufuneka kuxutywe kwaye uthele i-250 ml yamanzi abilayo. Emva koko umxube kufuneka uphelelwe malunga nemizuzu emithathu, ngokuthe kancinci udibanise i-shavings evela kwikhandlela yecawa. Emva kokuba umxube ucolile kancane, kufuneka usetyenziswe kwi-bandage, isetyenziswe kwindawo ekhuhlane yesikhumba kwaye ushiye kule ndawo ubusuku bonke.
Amachiza athile asebenzayo ahlukeneyo awamapakethi ahlukahlukeneyo anyanisi. Nantsi iresiphi elula ukusuka kwenye yazo: i-bulb kufuneka ibhakikwe ehovini, ize ihlulwe ngokunyanisekileyo ibe ngamacwecwe kwaye iqhotyoshelwe kwindawo embi. Ngaphezulu kwe-anyanisi, fakela uboya bekotoni uze ulungise icompress ngephepha elixutywe okanye i-polyethylene.
Ukunyanzeliswa okunjalo kufanele kwenziwe rhoqo imihla yonke, de kube ikhefu liphule kunye ne-pus iphuma. Ngokuncedwa ngamaqabunga e-plantain kunokwandisa kakhulu intsebenzo ye-compress. Ukuba usebenzisa enye i-anyanisi kunye namaqabunga ahlanjwe ngokucophelela, i-pus iya kuphuma ngokukhawuleza, kwaye inkqubo yokuphulukana iya kuhamba ngokukhawuleza. Emva koko, isilonda sinokuphathwa ngesisombululo se-streptocid okanye ioli. Kwaye xa kuqala ukuphilisa, kuyacetyiswa ukuba uqhubeke usebenzisa amaqabunga endle.
I-anyanisi kunye nesepha yokuhlamba.
Ukuze i-hydradenitis yonyango iindlela zamachiza wendabuko, kukho enye ipakethe emnandi ye-anyanisi. Kuquka ukuxuba anyanisi ocoliweyo kunye nesepha. Emva koko faka izithako ezidibeneyo kunye namafutha eengulube ezandulela ngaphambili, kwaye uvumele ubunzima bube bupholile. Loo mveliso ugcinwa kakuhle kwifriji, ukwenzela ukuba angasetyenziselwa iiveki enye nesigamu.
Abagogo bethu basebenzisa elinye indlela yokulungisa. Bawuthabatha ubomvu ngaphandle kwaye bawuthwala kwi-side side. Emva koko, i-compress yayisetyenziselwa kwaye ibanjwe yonke imihla, ngezikhathi ezithile, ukucwilisa isikhumba nokuyibuyisela endaweni.
Isisombululo esisisigxina se-marigold singaphathwa ngesilonda. Ukulungiselela isisombululo, xuba i-tincture yale sityalo ngamanzi. Ungasebenzisa isisombululo se-yarrow okanye isisombululo seshumi se-marigold.
Kukho neendlela ezininzi zokupheka zokufumana iimpendulo ngaphakathi. Unokwenza ulungelelaniso oluncedo. Uya kufuna amaqabunga eucalyptus kunye ne-plantain, iintyatyambo ze-marigold, i-clover e-sweet and elderberry. Konke oku kufuneka kukhatywe, uthele amanzi aphelayo, uze kwi-thumba uze ubambe emlilweni imizuzu emihlanu. Emva koko umhluzi kufuneka ugcinwe ufudumele. Thatha okungenani kathathu ngosuku, ngekota yeglasi. Xa kusetshenziselwa ukufaka ubusi. Le mveliso inemiphumo emihle yentsholongwane, ngoko ingathathwa ngaphakathi okanye ngaphandle.
Kwizinto zokuqala zokusola kule sigulo kuyimfuneko ukuba uqhube ngokukhawuleza kunyango, ungayiqali kwaye ungavumeli ukuba uhlakulele. Ngokufanayo kunye nokunyangwa kwe-hydradenitis, yonke into enokwenzeka yokwenza isifo kunye nokusuleleka kumzimba kufuneka isuswe: i-otitis, i-appendages echaziweyo, i-cholecystitis.
Umthi womthi - yintoni lo mthi, ukhula njani kwaye usebenzise izixhobo
I-Demodecosis: unyango kunye nezilwanyana zomntu
Ukususa i-tartar ngamacandelo abantu
Imbonakalo ebonakalayo ebonakalayo ibonisa "I-Model Model yaseRashiya
Indlela yokunqoba nayiphi na indoda
Izifo zezipikili kunye nezithende zomntwana
Ukutya okuthethelelekileyo kwindoda yokulahlekelwa kwesisindo
Ngaba kulungele ukunceda umntu athethe iingxaki zakhe?
Imbonakalo esiyijongayo: uqoqosho alukho kwixabiso lomgangatho
Ukhohlakele yintanda ethandekayo, ungathembi